Sidee loo abuuraa backlinks ku saleysan ereyada muhiimka ah?
Waa fikrad aad u caan ah oo raadinaya maareynta makiinada oo aaney jirin wax ereyo ah oo muhiim ah sida jirta, sida dhabta ah, ma jirto siyaabo kale oo aad macaamiishu u suura gali karto in aad hesho natiijada webka ee natiijooyinka raadinta. Sidaas darteed, waa aasaas u ah SEO. Waa wax aan suurtagal ahayn in la hagaajiyo website-kaaga iyo content haddii aadan sameynin cilmi-baaris ku-dhisan. Haddii aadan laheyn ereyada muhiimka ah ee aad bartilmaameedsaneysid, dardargelintaada SEO maahan macno.
Maalmahan, oo soo socda liis ay ku qoran yihiin shuruudaha raadinta ee muhiimka ah iyo shuruudaha sare ee aad rabto in lagu beegsado maahan mid aad u adag. Si kastaba ha ahaatee, ogaanshaha waxa loo baahan yahay in lagu daro mid kasta oo ka mid ah waxay u muuqan kartaa mid adag. Maadaama ganacsiyo badan oo internetka ah ay isticmaalaan qalabka cilmi-baadhista ee isku midka ah, waxay ku dhammaanayaan isla talooyinka hal warshad. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay ka hadlaan qalabka cilmi-baarista ee muhiimka ah sida Semalt Auto SEO, Moz iyo kuwo kaleba.Waxay sidoo kale u sheegi waayeen ganacsatada sida ay ugu adag tahay inay u kala hor mariso ereyga raadinta. Inkastoo ay ku siin karaan fikrad, iyagu sidoo kale ma aha 100% sax ah. Haddii aad isweydiiso sababta aysan kuu keeni karin natiijooyinka tayo sare ee lacagtaada, markaa waxaan kuu furi doonaa qarsoodi. Qofna si dhab ah uma ogaan karo sida Google uu ugu sarreeyo boggaga internetka. Wax kasta oo aan ognahay waa in Google uu isticmaalo in ka badan 200 shuruudo kala duwan, ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin AI-algorithm, backlinks, and content. Ka sokow, waxaan ognahay in Google uu si joogto ah u tijaabinayo barashada mashiinka iyo cusub AI-algorithms. Way adagtahay in aad si joogto ah ula socotid isbedelka Google oo joogto ah, taas oo ah sababta ay u ololeyn wanaajinta mashiinka raadinta ku siin karin 100% damaanad qaadka guulaha ganacsigaaga internetka. Si kastaba ha ahaatee, waxaan wali ku sii jiri karnaa meel u dhow waxa ay Google ku leedahay adoo hirgalinaya qaar ka mid ah hababka ugu fiican ee la xaqiijiyay. Aan ka hadalno qaar badan oo iyaga ka mid ah.
Backlinks oo la yareeyey ereyada muhiimka ah waa WAA!
Ugu hooseyntii ololaha aad ufixinayso, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid boggaga sarreeya ee loogu talagalay ereygaaga muhiimka ah iyo lambarka iyo tayada dhabarka bogagahan. Si aad u xulato ereyada ugu xooggan ee raadinta, waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah qalabka xirfadlayaasha ah ee internetka - Soodhaweynta Auto SEO , SEMRush ama MOZ. Dhammaantood waxay ku siin doonaan macluumaad sax ah oo tayo leh waxayna kaa caawinayaan inaad hagaajisid bogga SEO. Midkoodna waa bilaash, laakiin tusaale ahaan, Semt waxay siiyaan macaamiisha wakhti bilaash ah oo kaa caawinaya fahamka faa'idooyinka barnaamijkani uu wax ku biirin karo ganacsigaaga internetka. Isticmaalida qalabka wax-qabadka xirfad-yaqaanada, waxaad awoodi doontaa inaad fahamto waxa ereyada muhiimka ah ee ku tartamaya ee ku tartamaya SERP-ga. Waxaa intaa dheer, waxaad arki doontaa muhiimada ay leedahay domain. Xidhiidhka domainka ee dheeraad ah bogga, Google-ka sareeya wuxuu ku darayaa natiijooyinka raadinta.
Si kastaba ha noqotee, waqtigayaga, kaalin aan ka weyneyn oo ka fiican tayada marka ay timaaddo dhabarka. Taasi waa sababta tirada xidhiidhada domain aysan ka dhicin jagada booska 1 ilaa 10. Qiimaha dhabta ah ee domainka waxaa lagu muujiyay UR ama URL Rating. UR waxa ay u adeegtaa sida tayada tayada ee domains ee ku xiran bogga.
Si aad ugu sarreeysid SERP, waxaad u baahan tahay waxyaabo badan oo si fiican loo fiicnaaday oo tayo leh oo ka yimaada domains. Waxaa intaa dheer, qoraalada gadaashka gadaashaba waa inay ku jiraan erayo muhiim ah oo qaddar-dherer leh oo ku yeelan doona qiime ka badan boggaaga SEO Source .